Roll akpụ igwe, Slitting & CTL machine - Linbay
Industrylọ Ọrụ Eletrik
USB tree Roll akpụ Machine
Igwe eji akpụ akpụ akpụ
Ngwongwo Strut Channel Roll
Din Rail Roll na-akpụ Mahchine
Mpempe igwe na - ebu ihe eji eme ihe ndozi
Kwụpụ Doo mpịakọta akpụ igwe
Igbe igwe doo igwe akpụ
Zọ & Window
Rolling Shutter Slat Roll akpụ Machine
Rolling Shutter Door Rail Roll Roll Machine
Ọkpụkpọ Ọkpụkpọ Octagonal Tube
Mpempe Rolzọ Mgbanye / Window Frame Roll
Ihe omume nke Marcos de Puertas
B oche Roll na-akpụ igwe
C Purlin Roll akpụ Machine
Z Purlin Roll akpụ Machine
Sigma Purlin Roll Roll Machine
CZ Purlin Roll Roll Machine
Ihe eji eme CZS Purlin Roll
Perfiladora de Polines ụlọ ọrụ
Stud na Track mpịakọta akpụ igwe
Mpempe igwe na-akpụ akpụ Light Gauge steel
Machinekpụzi akpụ akpụ Iron Silo
Ubi Vineyard Roll akpụ Machine
Scaffold plank rolling machine
Igwe eji akpụ akpụ na-akpụ akpụ oche
Mpempe igwe na-akpụ akpụ Trapezoidal Roof Panel
Conformadora maka Chapa T-101
Conformadora maka Calamina TR4
Conformadora maka Plancha PV4
Mpempe igwe na-akpụ akpụ oche
Ugboro abụọ Layer Panel mpịakọta akpụ igwe
Ridge Cap mpịakọta akpụ igwe
gọta Roll akpụ Machine
Mpempe Rolkpụpụta Mpepu Pipe Downspout
Perfiladora de Bajante na Canalón
Perfiladora de Canaletas America
Highway U Post Roll akpụ Machine
Highway Guardrail End Ọnụ Machine
Anyị na ahịa / mmekọ
Igwe na-akpụ akpụ akpụ akpụ Plank Roll
Ft oche TR80 mpịakọta akpụ igwe
Cz Purlin Roll akpụ Machine
Ngwunye Mpempe Clọ C Profaili
Ngwakọta igwe kwụ ọtọ
Mpempe Nri Din Rial Din Rial
Igwe eji akpụ akpụ Angle
Ngwunye Mpempe Dinka
Kedu ka igwe LINBAY si arụ ọrụ n'oge COVID-19?
Ntinye nke igwe na-akpụ igwe n'oge COVID-19 bụ n'efu!
Site na nke a LINBAY ga akowa otu anyiesi echichi igwe igwe anyi.
Nke mbụ, anyị ga-edozi igwe na osisi anyị, anyị ga-ajụ ụdị nha ị ga-ebu ụzọ rụọ, anyị na-etinye igwe na nha ọ ga - ewepụta ma gbanwee usoro ziri ezi niile tupu ebuga ya, yabụ na ịkwesighi gbanwee ihe ọ bụla mgbe ị nwetara igwe a.
Nke abuo mgbe anyi weputara igwe maka debug, anyi na-ewe vidio ka imara otu esi ejiko ha. Igwe ọ bụla nwere vidiyo ya. Na vidiyo, ọ ga-egosi otu esi ejikọ eriri na ọkpọkọ, tinye mmanụ, tinye usoro anụ ahụ wdg.
Nke a bụ ihe atụ nke vidiyo ahụ: https://youtu.be/p4EdBkqgPVo
Nke ato, mgbe ị natara akụrụngwa, ị ga-enwe wahtsapp ma ọ bụ wechat group, injinia anyị (Ọ ​​na-asụ bekee na Russian) na mụ (a na m asụ bekee na Spanish) ga-anọ n’otu ahụ iji kwado gị na obi abụọ ọ bụla.
Nke anọ, anyị na-ezitere gị akwụkwọ ntuziaka na Bekee ma ọ bụ Spanish ka ị ghọta ihe niile pụtara nke bọtịnụ ahụ na otu esi amalite igwe.
Anyị nwere ikpe na onye ahịa m sitere na Vietnam natara igwe ya na November 25, wee tinye ya na akara n'abalị, wee malite ịmịpụta na Nọvemba 26. Ma e wezụga nke a, anyị enwetala ọtụtụ ihe ịga nke ọma n'ịwụnye igwe ndị gbagwojuru anya. Enweghị nsogbu na ntinye igwe gị. LINBAY na-enye ndị kachasị mma na ọrụ kacha mma maka ndị ahịa anyị, ọkachasị n'ọnọdụ a. Ikwesighi ichere ruo mgbe COVID gafere. Nwere ike iji igwe anyị mepụta profaịlụ ozugbo.
Trọda fenda Roll akpụ Machine
2nd n'ala, No.23-26.27 Xinfengyuan Fangqian Street Liangxi Road Xinwu District, Wuxi, China
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ price, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.